Inona no atao hoe MX? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny M	» MX
MX no fanafohezana ny Mail Exchanger.
Ny firaketana mpanakalo mailaka dia mamaritra ny mpizara mailaka tompon'andraikitra amin'ny fanekena ny hafatra mailaka amin'ny anaran'ny anaran-tsehatra. Firaketana loharano ao amin'ny Domain Name System (DNS). Azo atao ny manamboatra firaketana MX maromaro, mazàna manondro andiam-pandefasana mailaka ho an'ny fampifandanjana ny entana sy ny tsy fahampiana.